Itoobiya oo booliska Somaliland u tababareysa qaabka loo maareeyo debadbaxyada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Itoobiya oo booliska Somaliland u tababareysa qaabka loo maareeyo debadbaxyada
Addis Ababa – Mareeg.com: Dowladda Itoobiya ayaa maamulka Somaliland u ballan qaadday iney u tababareyso ciidamada booliska si ay u maareeyaan debadbaxyada.
Warsaxaafadeed kazoo baxay wasaaradda arrimaha ibedda maamulka Somaliland ayaa lagu sheegay in wasiirrada khaarajiga iyo daakhiliga Somaliland Maxamed Biixi Yoonis iyo Cali Maxamed Warancadde magaalada Addis Ababa kulan kula yeesheen wasiirka arrimaha federaalka u qaabilsan Itoobiya Dr. Shiferaw Tekel Mariam, ayna ka wada hadleen arrimo ay mid tahay in Itoobiya ku tababarto booliska maamulkaas, sida loo maareeyo debadbaxyada kala duwan.
“Kulan rasmi ah oo dhexmaray Wasiirka Arrimaha Federaalka Ethiopia Dr. Shiferaw Tekel Mariam iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancadde oo uu ku wehelinayey Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis oo qaatay muddo saacad iyo bar ah, ayaa magaalada Addis Ababa ka dhacay” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Kulankan ayaa sda warkja lagu sheegay lagu lafo-guray arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xoojinta nabadgelyadda iyo amniga guud ee labada dhinac, ammaanka gobolka iyo iskaashiga.
Wasiirka Arrimaha Federaalka Itoobiya Dr. Shiferaw Tekel Mariam ayaa ballanqaaday inay Somaliland ka kaalmayn doonaan tababarka booliska, gaar ahaan habka loo maamulo, loona maareeyo bannaanbaxyadda silmiga ah ama nabadgelyo.
Maamulka Somaliland ayaa aad ugu tiirsan dowladda Itoobiya, oo ka caawisa arrimo fara badan, iyadoo xitaa Itoobiya horay tababar u siisay ergada Somaliland uga qeybgashay wada hadalladii u dambeeyey ay Turkiga kula gashay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Galgaduud: Qiimaha biyaha oo cirka isku shareeray deegaano hoosyimaada Guriceel